सुन्दर सल्यान | Saugat : Naya Yougbodh
Filed Under: पर्यटकीय गन्तव्य
28th February 2015	·2Comments
शब्द/तस्बीर : कुलदीप न्यौपाने
सल्यान मध्यपश्चिम बिकास क्षेत्रको पहाडी जिल्ला हो । यहाँ विभिन्न किसिमका जडिबुटी, अदुवा, सुन्तला, कागतीका साथै तरकारी राम्रो उत्पादन हुने गर्छ । सल्यानको सुन्तला र अदुवा गुणस्तरका हिसाबले देशकै उत्कृष्ट मानिन्छ । यहाँको सुन्तला र अदुवा संकलनका लागि व्यापारीहरु बाहिरी जिल्लाबाट गाउँमै पुग्ने गर्दछन् ।
प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनका हिसाबले थुप्रै सम्भावना रहेको सल्यान उचित प्रचार प्रसार र पर्यटकीय सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धनको अभावमा ओझेलमा परेको छ । दाङको तुलसीपुरबाट राप्ती राजमार्ग हुँदै सल्यानको कपुरकोटस्थित देशकै चर्चित तरकारी बजार केन्द्र सल्यानको प्रवेशद्वार हो । सल्यान प्रवेशको मुख्य द्वार कपुरकोट जिल्लाकै चर्चित तरकारी बजार केन्द्र हो । यहाँको तरकारी काठमाडौं, नारायणगढ, वुटवल, नेपालगञ्ज, दाङलगायतका ठाउँहरुमा पुग्ने गर्दछ ।
जिल्लाको बीच भागबाट नै बगेको शारदा नदीले यहाँको सुन्दरता बढाउनुका साथै शारदाका फाँटहरुमा धानबालीका लागि सिचाइको सुविधा प्रदान गरेको छ । राप्ती राजमार्ग सल्यान हुँदै रुकुमसम्म पुगेको छ । त्यस्तै, सुर्खेत हुँदै भेरी नदीको तिरैतिर भएर पश्चिम सल्यानको सल्लीबजारबाट पनि सल्यान प्रवेश गर्न सकिन्छ । यो सडक सुर्खेत हुँदै जाजरकोटसम्म पुग्ने गर्दछ । यहाँ सल्यानका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमध्ये छायाक्षेत्र, कुपिण्डे दह र खैराबाङको विषयमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालका सबै शक्तिपीठहरुमध्ये बली नचढाइने एकमात्र शक्ति पीठ हो सल्यान छायाक्षेत्रको छत्रेश्वरीदेवी मन्दिर । यहाँ सर्वप्रथम अष्टभैरवले पूजा आराधना गरेकाले कुनै पनि अवसरमा बलि नचढाइने बताइन्छ । सत्ययुुगमा महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर विश्व भ्रमण गर्दा देवीको अन्तिम अंग पतन भएको विश्वास गरिने छायाक्षेत्र सल्यानको महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन गन्तव्य हो ।
दाङको घोराहीदेखि करीब ७० किलोमिटर राप्ती राजमार्ग पार गरेपछि सल्यानको शंखमूल पुगिन्छ । त्यहाँबाट पैदल एक घण्टा उत्तरतर्फको डाँडोमा चढेपछि छत्रेश्वरी देवीको मन्दिरमा पुगिन्छ । सल्यान सदरमुुकाम खलंगादेखि १९ किलोमिटर दक्षिणपूूर्वमा पर्ने उक्त मन्दिर शारदा नदीको पनि पूूर्वतिर रहेको छ ।
त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई छायाक्षेत्र साँच्चिकै आफै छायाँमा परेको महसुस हुन्छ । टाढा–टाढाबाट मानिसहरु आए पनि यहाँ आउने बाटो, आवास, पानीलगायतको राम्रो व्यवस्था हुुनसकेको छैन । ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छायाँक्षेत्र मन्दिरमा शिवरात्रीको बेलामा ठूूलो मेला लाग्ने गर्दछ ।
मन्दिर परिसरमा अहिले छत्रेश्वरी देवीको ठूूलो मन्दिर छ । यससँगै सुुकमोला योगिनी पिशाचेश्वर महादेवको उत्पत्ति भएको धार्मिक विश्वास छ । मन्दिर परिसरको उत्तरतिर एउटा ठूूलो शीला छ, जहाँ सतिदेवीको सम्पूूर्ण अंग पतन भएको विश्वास गरिन्छ । अंग पतन भएको शीलामा आँखाले अवलोकन गरे सल्यानका गाउँबस्ती देख्न सकिन्छ भन्ने किंवदन्ती छ ।
सल्यान जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल भन्दा नि फरक नपर्ला कुपिण्डे दहलाई । जिल्लाको महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदाको रुपमा रहेको कुपिण्डे दह (ताल) कुपिण्डे गाविसमा पर्दछ । सदरमुकाम खलङ्गादेखि २४ किमि पश्चिममा पर्ने यो दह निकै मनोरम र आकर्षक छ । चारैतिर पहाडले घेरिएको र बीचमा नीलो पानीले भरिभराऊ कुपिण्डे दहले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि मोहित बनाएरै पठाउँछ । वरिपरि मिलेका पहाड, हरियो जंगल र बीचमा नीलो आकाशझैं उत्तर दक्षिण फैलिएको दह साँच्चिकै प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो ।
कुपिन्डे दहको क्षेत्रफल कति छ भनेर नाप नभए पनि स्थानीयबासीले २ हजार ८ सय क्षेत्रफलमा फैलिएको दावी गर्छन् । वर्षेनी कुपिण्डे दहसँगै जोडिएको मन्दिरमा पूजाआजा गर्न टाढा–टाढा भक्तजनहरु समेत आउने गर्दछन् । दहकै छेऊमा रहेको मन्दिरमा बराहदेवको आराधना गरिन्छ । यो मन्दिरमा मार्ग शुक्लपूर्णिमा र बैशाख शुक्लपूर्णिमाका दिन ठूलो मेला लाग्दछ ।
कुपिण्डे दह संरक्षण समितिले दहमा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उत्तर दक्षिणतर्फ फैलिएको उक्त दहको पूर्व र दक्षिणमा ज्यामिरे पर्छ र उत्तरमा दह । दहमा पानी कतैबाट आउँदैन तर दक्षिण खाडल भएर निस्कन्छ । वरिपरि हरियाली वन जंगल छ । जंगलमा घोरल, रतुवा, भुइचे कालिज, परेवा र तलाउमा हाँस, जलेवा पाइन्छ । राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकासका पूर्वाधारहरुको अभावका कारण कुपिण्डे दहलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन ।
खैराबाङ भुवनेश्वरी मन्दिर ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् प्राकृतिक पर्यटनको एक महत्वपूर्ण स्थल हो । सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नं. ११ खैराबाङमा रहेको मन्दिर स्थललाई सत्य युगमा महादेवले सत्यदेवीको मृत शरिर बोकेर विश्व भ्रमण गर्दा देवीको अंग पतन भएको विश्वास गरिन्छ ।
खैराबाङ भुवनेश्वरी मन्दिर समुन्द्री सतहबाट १ हजार ६ सय फिट अग्लो पहाडमा अवस्थित छ । यो मन्दिर सल्यान सदरमुकाम खलंगादेखि १६ किमि पूर्वी दक्षिण खैराबाङमा पर्दछ । खैराबाङ पुग्न सल्यानको व्यापारिक केन्द्र शीतलपाटीबाट एक घण्टा र सदरमुकाम खलंगा हुँदै साढे दुई घण्टा लाग्दछ ।
खैराबाङ भुवनेश्वरी मन्दिरमा शुक्लपक्ष, मंगलबार र शनिबार पूजा आराधना गर्नेको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । शुक्लपक्ष अष्टमी, नवमी र चतुर्दशीमा विशेष दर्शन हुने गर्दछ । चैत्र शुक्लपक्ष र आश्विन शुक्लपक्षको बेला १५ दिन भक्तजनहरुको घुइँचो लाग्दछ । यस मन्दिरमा भवानी भुवनेश्वरीले मनले चिताएको मनकामना पूरा गर्ने विश्वास लिएर बलि चढाउने गरिन्छ ।
खैराबाङमा वैदिककालमा पूजा आराधना गरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद (घमण्ड) र मात्सर्य (इष्र्या) त्याग्न देवीसँग माग गरिन्थ्यो । खैराबाङमा पञ्चबलिका रुपमा बोका, राँगो, परेवा, भेडा र हाँसको बलि चढाउँदछन् ।
Rajesh basnet says:
I feel proud.धेरै खुसि लायो हाम्रो सल्यानको बारेमा यतिधेरै जानकारी गराउनु भएकोले।thaaankyou.
Samir Dc says:
Your article is more interesting…I am also much influenced by the natural and cultural beauty of Salyan district.